Duqa Muqdisho oo kulan la yeeshay Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya & Taageeero uu weydiistay. [Sawirro] | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Duqa Muqdisho oo kulan la yeeshay Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya & Taageeero uu weydiistay. [Sawirro]
Guddoomiyaha Gobolka Banadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamud Maxamed Finish ayaa xarunta safaaradda Mareykanka ee aagga Xalane kulan kula yeeshay safiirka Mareykanka u jooga Muqdisho Donald Yamamoto.
Kulankan oo ka mid ahaa is-aragyo joogto ah oo safiirka Mareykanka la yeesho mas’uuliyiinta iyo siyaasiyiinta Soomaalida ayaa loo wadahadlay qoddobo ay kamid yihiin xoojinta wadashaqeynta maamulka gobolka Banaadir iyo safaarada Mareyakanka, Iskaashiga Amniga Caasimadda, taageerada mashaariic horumarinee oo US AID ka fuliso Muqdisho iyo arrimo kale.
Safiirka Dowlada Dowlada Maraykanka u fadhiya Soomaaliya .Donald Yamamoto ayaa u balan qaaday Duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish inuu maamulkiisa ka taageeri doono horumarinta Caasimada Soomaaliya iyo adeegyada ay bixiso.
Gudoomiyaha ayaa uga mahadceliyay Safiirka doorka Dowlada Maraykanku ka qaadato dib u dhiska kaabayaasha Dhaqaalaha Gobolka Banaadir iyo taageerada Mashaariicda Hormarineed ee Maraykanku ka sameeyo dalkaan ay bur bureen dhamaan Kaabayaashiisii dhaqaalaha.
Waa kulankii uigu horeeyay ee dhex mara Duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish oo dhowaan xilka loo magacaabay iyo Safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto.
Previous articleTahriibayaashii ugu horeeyay ee Qaxootiga ku ahaa Liibiya oo laga dejiyay Dalka Rwanda. (Qoys Somali ah oo ka mida-Sawirro)
Next articleMareykanka oo xayiraad ku soo rogay Dad Kenyaan oo lagu xiriiriyey Argagixiso [Sheekha caanka ah ee Xassaan oo ka mida]